python - Synonyms of python | Antonyms of python | Definition of python | Example of python | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for python
Top 30 analogous words or synonyms for python
Python (programming language) Python သည် ယေဘူယျသုံး high-level programming language ဖြစ်သည်။ Python ၏ တည်ဆောက်ပုံ သဘောတရားမှာ ပရိုဂရမ် ရေးသားသူ ၏ စွမ်းဆောင်ရည် နှင့် ဖတ်ရှူလွယ်ကူရေး ကို အဓိက ထားသည်။ Python ၏ core syntax နှင် semantics မှာ minimalist ဖြစ်ပြီး ကြီးမား၍ စုံလင်သော သော standard library ရှိသည်။ Python သည် whitespace ကို block delimiter အဖြစ်သုံးခြင်းမှာ နာမည်ကျော် programming language များအကြားတွင် ထူးခြားလျက်ရှိသည်။
Python (programming language) = ကိုးကား =
MySQL Delphi, C, C++, Java, Perl, PHP, PureBasic, Python, Ruby, Smalltalk.NET.
Java (programming language) ယခုနောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် [[Ruby]]（[[JRuby]]）နှင့် [[Groovy]] ၊Jabaco ၊[[Python]]（[[Jython]]） အစရှိသည့် ဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားထားသော ပရိုဂရမ်များကို ဘိုက်ကုဒ်အဖြစ် ကွန်ပိုင်းလုပ်ခြင်းအားဖြင့် Java ဒြပ်မဲ့စက် အပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်စေသည့် နည်းလမ်းများကိုလည်း တွေလာရပါသည်။
Programming language နာမည်ကြီး Programming Languages များမှာ C, C++, C#, Java, Python, Ruby, PHP စသည်တို့ဖြစ်သည်။ Programming Language အများစုသည် သူ့နေရာနှင့်သူ အသုံးတည့်သည့်နေရာ သုံးသည့်နေရာရှိသည်။
Yahoo! BOSS ၃။ ။ BOSS Mashup Framework ----- Python Library နဲ့ UI Template တွေကို မကြာမီ ထုတ်ဝေတော့မှာ ဖြစ်ပြီး၊ Developer တွေအနေနဲ့ Search Result တွေနဲ့ အခြား public data source တွေကို ရောထွေးနိုင်ပါမယ်။
Sublime Text Sublime Text သည် Python ပရိုဂရမ်းမင်းနည်းပညာအသွင်အပြင်ဖြင့် (API) ရေးသားထားသော ကုဒ်တည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာ များစွာကိုရေးသားနိုင်အောင် အထောက်အပံ့ပေးထားသည်။ ထို့ပြင် အသုံးပြုသူမှ plugins များထည့်သွင်း၍ အသုံပြုနိုင်သည်။ အခမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်အောက်တွင် ၎င်းကို ပြုပြင်နိုင်သေးသည်။
ဗန်တို အမေရိကန် ဗန်ဒို သင်တန်းကျောင်း တွေမှာ ဗန်ဒိုရဲ့ အခြေခံ ကျင့်စဉ်တွေနဲ့ အဓိက ပုံစံ ၉မျိုးဖြစ်တဲ့ Bull, Boar, Cobra, Viper, Python, Panther, Tiger, Scorpion နဲ့ Eagle ပုံစံတို့ကိုလည်း အထူးပြု သင်နိုင်ပါကြသည်။
အောင်လအင်ဆန် အောင်လအင်ဆန် ()သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အသုံးချ ကိုယ်ခံပညာ တိုက်ခိုက်ရေးလောက ကြေးစားပွဲစဉ်များတွင် မြန်မာ့စပါးကြီးမြွေ (Burmese Python) ဟု နာမည်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်နေသော ကချင်တိုင်းရင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ အရပ် ၆ ပေ ၁ လက်မနှင့် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် ၁၈၅ ပေါင်ရှိပြီး ကျောပြင်ပုခုံးနေရာတွင် "Jinghpaw" ဟု တက်တူးရေးထိုးထားသော MMA မက်ဒယ်လ်ဝိတ်တန်းရှင် ဖြစ်သည်။ အောင်လအင်ဆန်သည် MMA (One Championship) မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆု ဆွတ်ခူးနိုင်သော ပထမဆုံး မြန်မာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။